Romana 12 - Ny Baiboly
Romana toko 12
Samia masina sy miasa, araka ny fanomezam-pahasoavana azony avy - Fifankatiavana - Fihavanana amin'ny olona rehetra.
1Koa mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram-pon'Andriamanitra, samia re manolotra ny tenanareo amin'izy Tompo, ho sorona velona, masina, ankasitrahany; fa izany no fanompoam-panahy mety hataonareo aminy. 2Ary aza manaraka an'izao tontolo izao, fa miovà amin'ny fanavaozan'ny Fanahy, mba hahafantaranareo ny sitra-pon'Andriamanitra, izay sady soa sy ankasitrahany no lavorary.
3Noho ny fahasoavana nomena ahy, dia izao no lazaiko aminareo tsirairay avy: Aza mihevi-tena mihoatra noho ny mety, fa samia mahalala ny antonona azy, araka ny anjara finoana nomen'Andriamanitra azy avy. 4Fa toy ny tena iray ananantsika, misy rantsam-batana maro tsy mitovy asa, 5no maha-tena iray antsika ao amin'ny Kristy, na dia maro aza isika; ka mifampirantsam-batana isika rehetra tsirairay avy. 6Ary samy manana ny anjara fanomezany isika araka ny fahasoavana noraisintsika avy, ka raha faminaniana izany, dia aoka ho arakaraka ny anjara finoana; 7raha fandraharahana, dia aoka ho ao anatin'ny fandraharahana; ity moa nandray ny fanomezana hampianatra, aoka izy hampianatra; 8itsy kosa ny fanomezana hananatra, dia aoka izy hananatra; ny iray mizara, ka aoka hanao izany amim-pahatsorana; ny iray kosa manapaka, ka aoka hanefa izany amim-pahazotoana, ary ny hafa koa manao asa fiantrana, dia aoka hanatanteraka izany an-kafaliana.
9Aza asiana fihatsarambelatsihy ny fitiava-namana: mankahalà ny ratsy, ary miraiketa amin'ny tsara. 10Mifankatiava toy ny ifankatiavan'ny mpirahalahy; mifaninàna hifanaja. 11Raha ny amin'ny fahazotoana, dia aza mitaredretra, fa mbà mafana fo; ny Tompo anie no tompoinareo e! 12Mifalia amin'ny fanantenana, mandefera amin'ny fahoriana, ary mahareta amin'ny fivavahana; 13manampia ny olo-masina araka izay ilaina, ary mazotoa mampiantrano vahiny. 14Misaora izay manenjika anareo; misaora, fa aza manozona. 15Miaraha mifaly amin'izay mifaly, ary miaraha mitomany amin'izay mitomany. 16Miraisa hevitra: aza miavonavona, fa mifandraisa amin'ny iva toetra. Aza manao ny tenanareo ho hendry.
17Aza mamaly ratsy, na amin'iza na amin'iza; fa mivonòna hanao ny tsara, tsy eo anatrehan'Andriamanitra ihany, fa eo imason'ny olona rehetra koa. 18Raha azonareo atao, dia mihavana amin'ny olona rehetra. 19Aza mamaly ratsy, ry malala, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no avelao hanao izany, araka ny voasoratra hoe: Ahy ny famaliana, izaho no hamaly, hoy ny Tompo. 20Omeo hanina ny fahavalonao raha noana, ary omeo hosotroina izy raha mangetaheta, fa ny fanaovana izany no hanangonanao vain'afo ho eo an-dohany. 21Aza mety ho resin'ny ratsy, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. >